Indawo yokuhlala yaseFrance Holiday - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseFrance Holiday
Bort-les-Orgues, Limousin, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Julie & Laurens
Sitholakala maqondana neMakethe Ehlanganisiwe (Marche Couvert) ekhoneni le-Rue Raspail ne-Rue du Marche.
Maphakathi nedolobhana elihle laseFrance, sinefulethi elizimele lombhangqwana ofuna ukubaleka. Leli fulethi linekhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela, indlu yangasese nomshini wokuwasha okuhlanganisa indawo yokubeka eyomile, i-ayina kanye nebhodi loku-ayina. I-Wifi yamahhala nengenamkhawulo iyatholakala. Umbhede onethezekile kasayizi omkhulu owenziwe ngelineni elihlanzekile elihlanzekile ulindele ukufika kwakho. Ifulethi liphansi futhi liyimfihlo kakhulu. Isuphamakethe enkulu iwuhambo olufushane lwezidingo zakho zansuku zonke. Indawo yokupaka eyanele yamahhala yomphakathi iyatholakala ngaphambi kwendlu futhi njengoba umaphakathi nedolobha ungaphakathi kwebanga lokuya ezindaweni zokudlela nezitolo. Thola iholide elijwayelekile lesiFulentshi; ujabulele ubuhle bemvelo nokuzola kwe-Orgues ngemibono emihle ebheke isifunda noma uhambe enye yezindlela eziningi zehlathi. Vakashela izimakethe eziningi ze-Brocante kanye ne-Vide Greniers emadolobheni aseduze ukuze uthenge okuthile okuvamise ukuvamise ukubizwa ngesiFulentshi futhi okuhlukile noma vele uhlale uphumule futhi uthokozise ukunambitheka kwakho ngokudla kwasendaweni. Chitha isikhathi echibini nase-Chateau De Val yomlando futhi ujabulele ukugibela isikebhe ngokukhululekile, ulwandle kanye nemisebenzi eminingi yamanzi. I-Dordogne igeleza phakathi nedolobha elengeza ebuhleni bendawo. Imakethe yokudla yasendaweni ingamamitha angu-100 ukusuka emnyango wakho wangaphambili njalo ngoMgqibelo futhi phakathi nezinyanga zasehlobo ama-cherry amasha aphakathi kwesizini futhi atholakala ngobuningi. Ama-Patisseries endawo azungezile anohlu lwamakhekhe namakhekhe amaningi ajabulisayo. Phakathi nezinyanga zasehlobo kunezinhlobonhlobo zemisebenzi yomphakathi ehlelwe phakathi nendawo yalesi sigodi saseFrance esinobungane.
ubusuku obungu-7 e- Bort-les-Orgues
4.50 · 5 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Julie & Laurens
Laurens is originally from Holland and is from a very large family. We wanted to be close enough for the family to visit us and enjoy the nice weather and soak up the relaxed and friendly atmosphere that the villages in France are renowned for (Website hidden by Airbnb) "Health, Wealth , Happiness and a Long Life to Enjoy it” is our motto and we enjoy life to the fullest every day. Julie’s background is in Hospitality and Laurens has a background in Information Technology and Music. We love food and wine and enjoy the different cultures and cuisines from around the world. We sincerely hope that you will have a very enjoyable experience by immersing yourself in the French culture and that you will really feel at home in Bort Les Orgues.
We came to France for a holiday and experienced the French lifestyle and were so enchanted that we decided to buy a house and spend more time in this magnificent country. After hav…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bort-les-Orgues namaphethelo